Inzuzo ye-United States Ubumi kunye nokuBamkela
Ngaphantsi komthetho wesigqeba, i-United States i-Oath of Allegiance, ebizwa ngokusemthethweni ngokuthi "Indlela yokuBamkela," kufuneka ithatyathwe ngabo bonke abafudukayo abafisa ukuba ngabemi baseMelika:
ukuba ndiyilahle ngokupheleleyo kwaye ndilahle yonke into yokunyaniseka nokunyaniseka kunoma yiphina inkosana yangaphandle, amandla, urhulumente, okanye ulawulo lwaloo nto okanye ngaphambili ndibe ngumfundi okanye ummi;
ukuba ndiya kuxhasa nokukhusela uMgaqo-siseko kunye nemithetho yase-United States yaseMerika ngokumelene nazo zonke iintshaba, zangaphandle nakwasemakhaya;
ukuba ndiza kuthwala ukholo lokwenyaniso nokunyaniseka okufanayo;
ukuba ndiza kuthwala iimbombo egameni le-United States xa kufunwa ngumthetho;
ukuba ndiya kwenza inkonzo engekho nxamnye neMikhosi yeZizwe zaseMerika xa ifunwa ngumthetho;
ukuba ndiza kwenza umsebenzi wokubaluleka kwesizwe phantsi kolawulo olusesikweni xa kufunwa ngumthetho;
kwaye ndiyithatha inyanzelekile ngokukhululekile ngaphandle kokugcinwa kwengqondo okanye injongo yokukhusela; ngoko ndincede uThixo.
Ngokwamkela into endiyifumene nayo, ndifake umqondiso wam.
Ngaphantsi komthetho, i-Oath of Adlegiance inokulawulwa kuphela ngamagosa e-US Customs and Immigration Services (USCIS); abagwebi basemzini; neenkundla ezifanelekileyo.
Ukusetyenziswa kokuqala kwesifungo sokunyaniseka kubhalwe ngexesha leMfazwe yokuVikela xa iinqununu ezintsha kwi-Continental Army zifunwa yiCongress ukuba idibanise nantoni na ukuthembeka okanye ukuthobela kwi-King George yeNgqungquthela yesithathu.
Umthetho wokuPhathwa kweziNyaka ka-1790, abafaki bezizwe abafake izicelo zokuba ngabemi ukuba bavumelane "ukuxhasa uMgaqo-siseko we-United States." UMthetho weNkcubeko we-1795 wongezelela imfuneko yokuba abafuduki balahla inkokeli okanye "inkosi" yelizwe labo. UMthetho woLungelelaniso we-1906 kunye nokudala i- Ofisi yokuqala yolawulo lokuthunyelwa kwabasebenzi baseburhulumenteni, udibanisa igama kwisifungo esidinga ukuba abemi abatsha bafungise ukholo lokwenyaniso kunye nokunyaniseka kuMgaqo-siseko kunye nokuzikhusela kuzo zonke iintshaba, zangaphandle nakwasemakhaya.
Ngomnyaka we-1929, iNkonzo yokuBathunywa koMfudaniso yayimisela ulwimi lolwimi. Ngaphambi koko, inkundla nganye yokufuduka yayikhululekile ukuhlakulela amagama kunye nendlela yokulawula iNdlela.
Icandelo apho abafaki-zicelo bafunga ukuphatha iinqwelo kunye nokwenza inkonzo engeyiyo yokulwa kwimikhosi yase-US ibandakanywe kwiNkcazo yoMthetho woKhuseleko lwangaphakathi ka-1950, kwaye icandelo malunga nokwenza umsebenzi wokubaluleka kwelizwe phantsi kolawulo lwabantu longezwe ngu-Immigration kunye noMthetho weSizwe ka-1952.
Indlela Oyiyoyitshintshwa ngayo
Igama elikhoyo langoku leNkqubo yoBuchule lusekwe ngumyalelo wokulawula uongameli. Nangona kunjalo, i-Customs and Immigration Service inokuthi, phantsi koMthetho weNkqubo yoLawulo, iguqula isicatshulwa seNkatha nangaliphi na ixesha, ngaphandle kokuba igama elitsha lidibana ngokufanelekileyo nale "iinqununu ezinhlanu" ezifunekayo yiCongress:
Ukuthobela uMgaqo-siseko waseUnited States
Ukurhoxisa ukunyaniseka kunoma yiphina ilizwe langaphandle apho umfuduki ayenamandulo
Ukukhuselwa koMgaqo-siseko ngokuchasene neentshaba "zangaphandle kunye nasekhaya"
Uthembisa ukukhonza kwii-Armed Forces zase-United States xa zifunwa ngumthetho (nokuba zilwa okanye zingabikho ukulwa)
Uthembisa ukwenza imisebenzi engekho emthethweni "yobaluleka besizwe" xa kufunwa ngumthetho
Umthetho we-Federal uvumela abahlali abatsha ukuba bafune ukuxolelwa kabini xa bethatha iNtyala yoBumi:
Ngokuvisisana nesiqinisekiso sokuQinisekisa sokuQala inkululeko yenkolo, inqaku elithi "ngoko ndincede uThixo" likhethiweyo kwaye inqaku elithi "ngokuqinisekileyo" lingafakwa endaweni yegama elithi "ngesifungo."
Ukuba ngaba ummi wobahlali angafuneki okanye akakwazi ukufungela ukubamba iinqwelo okanye ukwenza imisebenzi engeyiyo yokulwa yempi ngenxa yokuba "uqeqesho kunye nenkolelo" yezokolo, banokushiya loo maqendu.
Umthetho uchaza ukuba ukukhululwa kwesibhambathiso sokuthwala iinqwelo okanye ukwenza imisebenzi engeyiyo yokulwa yempi kufuneka kusekelwe kuphela kwinkolelo yomfaki-sicelo ngokumalunga ne "Uphakamileyo," kunokuba kukho nayiphi na ipolitiki, i-sociological, okanye ifilosofi okanye imilinganiselo yokuziphatha ikhowudi. Xa besithi le nkululeko, abafake izicelo bangafuneka ukuba banikeze amaxwebhu axhasayo kwiinkonzo zabo zonqulo. Nangona umfaki sicelo engadingeki ukuba abe yinxalenye ethile yenkolo, kufuneka amise "inkolelo enyanisekileyo nenenjongo enobomi bomfaki-sicelo olinganayo nenkolelo yenkolo."
UFrank Carroll Umqeqeshi wokuThola umKhosi
Iyiphi Inombolo echanekileyo?
Yintoni uMfundisi wokuSebenza?
Amaqiniso Ngomthwalo weCave
I-Biography yeNkokheli yamaYuda uKumkani uDavide
Ungayifaka isicelo kwiSikolo sabangasese ehlobo?
Hlangana noMateyu umPostile